I-Bioografi kunye neencwadi ezilungileyo zikaMegan Maxwell | Uncwadi lwangoku
UAlberto Legs | | Ababhali, Iincwadi, Inoveli yothando
Ngaphandle kokusebenzisa isibizo sangaphandle, uMegan Maxwell waseSpain ebesoyisa iintliziyo iminyaka ngenxa yombulelo umkhuhlane intshontsho likhanyisiwe ngexesha elifanelekileyo njengoko inencindi. Sizicwilisa kwi UMegan Maxwell ngobomi kunye neencwadi ezilungileyo ukufumanisa amabali alo mbhali ubalulekileyo.
1 Ubomi bukaMegan Maxwell
2 Iincwadi ezilungileyo zikaMegan Maxwell
2.1 Ndibuze nantoni na oyifunayo
2.2 Ndingu-eric zimmerman
2.4 Iprojekthi yobomi bam
2.5 Intyatyambo kwenye intyatyambo
2.6 Chitha ubusuku kunye nam
2.7 Ibaluleke ngantoni kuwe?
2.8 Umnqweno unikiwe. Amagorha uMaxwell 1
Ubomi bukaMegan Maxwell
Ndikunye nomama waseToledo notata waseMelika, uMª Carmen Rodríguez del Álamo Lázara (Núremberg, 1965) wafudukela nonina eMadrid xa wayeneminyaka embalwa. Emva koqeqesho eSpain, waqala ukusebenza njengonobhala kwiofisi yezomthetho, nangona umbhali wexesha elizayo Washiya yonke into xa wayegula unyana wakhe.
Ixesha elinzima lokuba, ubuncinci, limnike ixesha elaneleyo lokulandela iindlela zokuzonwabisa ezindala ukuba ebengenalo ixesha lokuphinda aqhubeke, ebhala njengesithuthi anokungena kuso ngexesha lakhe lokuzimela. Ngenxa yoko, eswele uqeqesho, waqala thatha iikhosi ezahlukeneyo online ubhalo loyilo ukuphucula ubuchule bakho kunye nokuchaza isitayile sakho. Ngethamsanqa, omnye wootitshala endandifundisa nabo ikwangumhleli, emva kokufunda umbhalo-ngqangi we ndikuxelele Ndagqiba kwelokuba ndilipapashe ngo-2009. Eli bali aliyi kuba yimpumelelo nje kuphela, kodwa liya kunikwa nembasa Ibhaso laMazwe ngaMazwe leNoveli yamaRoma uSeseña.
Isihloko sokuqala sebhayiloji ukuya kuthi ga Iinoveli ezingama-35 apho uMegan Maxwell (isiteketiso esoloko sinxulunyaniswa nombhali welinye ilizwe) uphonononge isini intshontsho likhanyisiwe kunye nomdlalo wothando yokuthandwa kakhulu kule minyaka ilishumi, ngakumbi phakathi kwabaphulaphuli ababhinqileyo abafumene iinoveli ezinje Ndibuze ukuba ufuna ntoni na inguqulelo yesiko kunye nenkuthazo ngakumbi kunaleyo yokuqhekeka komhlaba I-50 shades zegrey.
Umbhali oza koyisa abo bafundi anomdla wokufunda ngokulula kodwa okunzulu, exhaswa ngokubanzi ziimeko ezifanelekileyo.
Ufuna ukwazi Iincwadi eziphambili zikaMegan Maxwell?
Iincwadi ezilungileyo zikaMegan Maxwell
Ndibuze nantoni na oyifunayo
Yapapashwa ngo-2012, Incwadi kaMaxwell edume kakhulu yathelekiswa ngaphezu kwesihlandlo esinye ukuya kwi-50 Shades yeGrey, Ukoyisa abaphulaphuli ababone le nguqulo "isondeleyo" njengokucebisa ngakumbi. Ibali elisazisa ngalo U-Eric zimmerman, Usomashishini owaziwayo waseJamani owathi emva kokusweleka kukatata wakhe wafudukela eMadrid ukuya kongamela abathunywa benkampani yaseMüller eSpain. Ukutyelela okuza kutshintsha ubomi bakho ngonaphakade Dibana noJudith intombazana entle kwaye ekrelekrele aya kuthi anikezele kuyo kwimidlalo eyahlukeneyo yesondo, iingcinga noqheliselo. Ubudlelwane obunobunkunkqele njengoko butyhafisa obuya kuba semngciphekweni xa bobabini abalinganiswa abaphambili beqala ukwazana ngcono kwaye uEric uzama ukufihla imfihlo emnyama ngazo zonke iindleko.
Impumelelo ye Ndibuze nantoni na oyifunayo Kwakunjalo ukuba uMaxwell apapashe ezinye izavenge ezintathu: Ndibuze into oyifunayo ngoku kwaye uhlala uhlala (2013) Ndibuze ufuna ntoni okanye undishiye (2013) kunye Ndibuze lento uyifunayo ndizokunika (2015).
Ifunyenwe njenge jikelezela ngaphandle Kwisaga Ndibuze ukuba ufuna ntoni, Ndingu-eric zimmerman ukumema ukuba ube namava ekhokelo lendoda ekhokelwa sisini kwindawo yakhe yokujonga. Ngelixa abafundi abaninzi befumanise ukuba kuyadanisa, abalandeli beenoveli eziphakamise uMaxwell waba nodumo baya kuba nakho ukonwaba ngale ndlela ipapashwe ngo-2017 eyalandelwa yinxalenye yesibini ekhutshwe ebutsheni balo nyaka.
Yapapashwa ngo-2013, Ndothuke yenye ye Ezona ncwadi zibalaseleyo nguMegan Maxwell. Ibali elizelwe kwimpumelelo yokudibanisa abalinganiswa ababini abahluke ngokupheleleyo kodwa ngesondo njengendawo eqhelekileyo. Incwadana enesidima ebalisa ukudibana phakathi kukaBjörn, igqwetha elidumileyo elinokuzibophelela kodwa elithanda imidlalo eyahlukeneyo yesondo, kunye noMelania, umqhubi wenqwelomoya waseMelika obonakala ngathi unamehlo wentombi ayiphetheyo njengomama ongatshatanga. Abalinganiswa ababini abakhulu indlela yabo ecinga ukuba iseti yintlantsi kunye Izigcawu ezithandekayo kubathandi boncwadi olungaqhelekanga.
Iprojekthi yobomi bam
Nangona lo mbhali esaziwa ngemisebenzi yakhe "yengozi", Iprojekthi yobomi bam Yayiyindlela yokufumana olona sukelo lwasekhaya kunye namabali othando. Kuthathwa njengenye ye Iincwadi eziphambili zikaMegan Maxwell, Le noveli ipapashwe kulo nyaka inika uSharon, umfazi oselula onoyise ongumnini wefemu yomthetho eyaziwayo, inkampani aqala ukuqeqesha ngayo intombi yakhe. Ukanti ngenye imini USharon ufumanisa iirisithi zebhanki ezahlukeneyo kunye neefoto zenye intombazana eyajika yangudade wabo. Uthungelwano losapho oluya kuthi luphume kummeli ophambili ukuba aluqale ngokuqala uhambo apho aya kudibana nendoda eya kumenza ukuba acinge ngokutsha ngobomi bakhe ngokupheleleyo.
Intyatyambo kwenye intyatyambo
Ipapashwe ngo-2017, Intyatyambo kwenye intyatyambo Ukujongana nembali yothando emnandi. Umlinganiswa ophambili, UZac Phillips, yindoda ethandana noSandra, Umfazi osemncinci onwele ezimdaka kunye noncumo oluqaqambileyo wambamba kwiminyaka emininzi eyadlulayo, ngeloxesha phambi kokuba uSandra nomama wakhe bagqibe ukufuduka kwiiScotland zaseScotland baye kwisixeko saseCarlisle ngokomnqweno wootatomkhulu noomakhulu babo. UZac akahambi nje kuphela eCarlisle ukuya kubuyisa uSandra, kodwa uhlangana nembali yosapho yengxabano kunye nenzondo echaza ubume bentsimbi yesithandwa sakhe.
Chitha ubusuku kunye nam
Uhlobo oluthandayo, oluthandwa kakhulu ngaphakathi komsebenzi kaMaxwell, lubandakanya amabali anje ngale noveli yapapashwa ngo-2016 yajika yaba yenye kumele. Ukulandela ekuvukeni Buza ukuba ufuna ntoni, ngeli xesha ngutitshala wesikolo esiphakamileyo saseBrazil, UDennis, intliziyo engafikelelekiyo egqiba ekubeni anikezele kumtsalane kaLola, Umfazi omncinci waseSpain adibana naye eLondon kwaye oqala ukumala ngokungafani nabanye abakhweli.
Ngaba ungathanda ukufunda Chitha ubusuku kunye nam?
Ibaluleke ngantoni kuwe?
UNoelia Estela Rince Ponce ngumdlali weqonga ofunwayo waseHollywood onemvelaphi yaseSpain obuyela eSpain eyokukhuthaza ifilimu yakhe yamva nje. Nangona kunjalo, ngexesha lokuhlala kwakho kwilizwe lethu igcinwe ekubanjweni nguJuan Morán, Isithandwa esidala adibana naso eLas Vegas. Iimfihlelo zexesha elidlulileyo eziza kujongana nomtsalane abavakalelwa ngawo bobabini abalinganiswa abaphambili. Ipapashwe ngo-2016, Ibaluleke ngantoni kuwe? yenye yeempumelelo ezinkulu zombhali.
Umnqweno unikiwe. Amagorha uMaxwell 1
Imalunga nebali likaLady Megan Phillips kunye ne-Highlander Duncan Mc Rae, i-Falcon. Ungumlobi omncinci kwaye mhle ophethe abantakwabo abancinci. Ngophawu olomeleleyo olumenza ukuba abe ligorha lokwenyani elinako konke ukuba ligorha elisetyenziselwa ukukhokela imikhosi kunye nokuphumelela idabi. Inkqubo ye- isaga samajoni maxwell kwenye yeengqokelela eziphumelele kakhulu zikaMegan Maxwell. Incwadi yakhe yokuqala Unqwenela ukuba ungayithenga apha
Ucinga ntoni nge UMegan Maxwell ngobomi kunye neencwadi ezilungileyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli yothando » I-Biography kunye neencwadi ezilungileyo zikaMegan Maxwell
Uncwadi lwabantu abakhubazekileyo, ukukhubazeka ekufundeni okanye ubunzima bokufunda.
Amabhaso kaNadal noJosep Pla kaGuillermo Martínez kunye noMarc Artigau